မျက်နှာဖုံးများအတွက်ကြိုးတပ် | လက်မှုပညာများဖွင့်ထားသည်
မျက်နှာဖုံးများအတွက် Hanger rack
တောရက်စ် | | လက်မှုပညာခံစားရတယ်, ကလေးများအတွက်လက်မှုပညာများ
မျက်နှာဖုံးများသည်အနည်းဆုံးယခုအချိန်ထိကလေးများအတွက်ပင်လျှင်နေ့စဉ်နှင့်အမျှဖြစ်သည်။ ယခုဆိုလျှင်တစ်နှစ်ကျော်ပြီဖြစ်သော်လည်းမည်သူမျှအကာအကွယ်မျက်နှာဖုံးမတပ်ဘဲသာမန်ဘ ၀ ကိုစတင်ခဲ့သည်။ ကလေးများအတွက်၊ သင်၏မျက်နှာဖုံးများထားရန်နေရာရှိသည် ၎င်းတို့ကိုအမြဲလက်ထဲတွင်ထားပြီးကောင်းစွာစုစည်းရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
ဤ mask hanger သည်ကလေးများနှင့်လူကြီးများအတွက်ပြီးပြည့်စုံသောဖြေရှင်းချက်ဖြစ်သည်။ မင်းဒီဇိုင်းကိုနည်းနည်းပြောင်းပြီးမင်းရဲ့အလှဆင်တာဒါမှမဟုတ်သစ်သားချိတ်ခုံအတိုင်းအရောင်တွေသုံးရင်တော့မင်းရဲ့မျက်နှာဖုံးတွေကိုတပ်ဖို့အကောင်းဆုံးနေရာရှိလိမ့်မယ်။ ဘယ်နေရာမှာမှမပတ်သက်ဘဲနဲ့.
ပစ္စည်းအနည်းငယ်သာလိုအပ်သည့်အပြင်အဆင့်ဆင့်သည်အလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။ မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းသင်သည်မျက်နှာဖုံးများကိုစနစ်တကျထားရန်ပြီးပြည့်စုံသောနေရာတစ်ခုရလိမ့်မည်။ မင်းသတ္တိရှိလား။ ဒါတွေဟာငါတို့လိုအပ်မယ့်ပစ္စည်းတွေဘဲ။
ပထမ ဦး စွာကျွန်ုပ်တို့သည်ခံစားချက်နှစ်ခုကိုဖြတ်တောက်သွားလိမ့်မည်အကျယ်ရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုမည့်ကြိုးဆွဲ၏ကြိုးဆွဲဘားကိုတိုင်းတာရပါမည်။ ကလေးများသို့မဟုတ်လူကြီးမျက်နှာဖုံးများအတွက်ကြိုးဆွဲရှိမရှိပေါ် မူတည်၍ အကျယ်သည်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ၂၀ သို့မဟုတ် ၂၅ စင်တီမီတာရှိလိမ့်မည်။
ကြိုးဆွဲ၏အောက်ဘားတွင်ကျွန်ုပ်တို့ခံစားချက်ကိုနေရာချသည် ကျွန်ုပ်တို့သည်စီလီကွန်၏ရက်ရောသောအလွှာကိုအသုံးချခြင်းကိုနောက်မှပိတ်လိုက်သည် ပူတယ်
ဤကဲ့သို့သောအရာတစ်ခုခုကျန်နေရမည်ကြိုးကွင်းကိုဆွဲထားရန် ဦး တည်ချက်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသောနောက်ကျောမှဆက်သွယ်မှု၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း။
ယခုငါတို့သည်အခြားအရောင်တစ်ခု၏ခံစားချက်ကိုမျက်နှာဖုံးများသိုလှောင်ရန်စာအိတ်အဖြစ်လုပ်ဆောင်မည့်အပိုင်းကိုကော်တင်သွားလိမ့်မည်။ ပထမဆုံးငါတို့အောက်ခြေမှာပူးပေါင်းပြီးတော့ ခရမ်းရောင်တွင်အစိမ်းရောင်ခံစားချက်များကိုခရမ်းရောင်ပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ကပ်သည်.
နောက်ဆုံး အလှဆင်ဖို့ခလုတ်တစ်ခုတပ်လိုက်ရအောင်ရောင်စုံပုတီးကဲ့သို့အခြားပစ္စည်းများထည့်နိုင်သော်လည်း၊ မင်းဒီမျက်နှာဖုံးကြိုးကွင်းကိုလုံးဝစိတ်ကြိုက်ဖြစ်အောင်အခြားအရောင်များနှင့်အတူမင်းရဲ့ကလေးလေးရဲ့နာမည်ကိုတောင်ဖန်တီးနိုင်တယ်။ ကဲဒါဆိုရင်မင်းရဲ့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကိုလုပ်ဆောင်ဖို့နောက်ထပ် tool တစ်ခုရှိထားပြီးပြီ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - လက်မှုပညာ » လက်မှုပညာနှင့်ပစ္စည်းများ » လက်မှုပညာခံစားရတယ် » မျက်နှာဖုံးများအတွက် Hanger rack